शशांकको अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा विवाद, शशांकबारे यसो भन्छन मीन विश्वकर्मा - Pahilo News
शशांकको अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा विवाद, शशांकबारे यसो भन्छन मीन विश्वकर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले हिन्दू राज्य कायम गर्न जनमत संग्रहमा जानु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भयो । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि उनको त्यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको भनी आलोचना गरे । पार्टीको जिम्मेवार नेताले दिएको त्यसखाले अभिव्यक्तिबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । कोइरालाको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै असर नगर्ने विश्वकर्माको भनाइ छ । विश्वकर्मासँग पहिलो न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले हिन्दू राज्य कायम गर्न जनमत संग्रहमा जानु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना भएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल हिन्दू राज्य नभए पनि नेपालका अधिकांश जनता हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्दै आएका छन् । त्यसैले बहुसंख्यक नेपालीले आफूले मानेको धर्मका आधारमा राज्य होस भनेर कामना गर्नु अनौठो होइन । तर, ‘नेपालको संविधान २०७२’ धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसाथ गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकै नतृत्वमा जारी भएको संविधानले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतामा आँच आउने गरी नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेताले अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । यो सबै कांग्रेसीको साझा धारणा हो ।
हाम्रा महामन्त्रीले कुन पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो जानकारी मलाई भएन । तर, अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताले त्यस्ता खाले विवादित अभिव्यक्ति दिनुहुँदृैन भन्ने मेरो भनाइ छ । उहाँले मात्र होइन अन्य नेताहरुले पनि यस्तो अभिव्यक्ति नदिँदा राम्रो हुन्छ ।
महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्तिका बारेमा पार्टी भित्र छलफल हुन्छ ?
निश्चित रुपमा उहाँ जस्तो जिम्मेवार नेताले यसरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुहुने थिएन । उहाँ जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र र संगठनमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल हुन्छ ।
महामन्त्री शशांकले मात्र होइन अन्य नेताहरु खुमबहादुर खड्का, शेखर कोइराला जस्ता नेताले पनि यस्ता अभिव्यत्ति दिदैँ आएका छन् । कांग्रेसका आधिकारिक धारणामै यस्तो अभिव्यक्तिले त असर गर्ला नि ?
गर्दैन, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा कुनै पनि कुरा स्थायी हुँदैन । परिवर्तन हुन्छ । हामीले हिजोसम्म चन्द्र र सुर्य रहुन्जेल राजा रहन्छन् भनेका थियौँ । अहिले चन्द्र र सुर्य रहिरहेका छन् । राजा र राजतन्त्र छैन । हामीले हिजो पञ्चाय अटुट रहन्छ भनेका थियौँ । अहिले पञ्चायत छैन । त्यसैले कुनै पनि कुरा परिवर्तन नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, अहिले भर्खर मात्र जनताको चाहना अनुरुप भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने संभावना हुँदैन ।
यस्ता खाले अभिव्यक्तिले राजनीतिक र साँस्कृतिक रुपमा पनि समस्या आउने खतरा हुन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनु हँदैन । त्यसो गरेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका आगामी पाटामा अवरोध हुनेछ । सबैलाई धर्म आआफ्नो धर्म मान्ने छुट छ । तर,संविधानमा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन हुँदैन । उहाँले बोलेको व्यक्तिगत विचार होला, पार्टीको आधिकारिक विचार होइन ।
राष्ट्रिय विराट हिन्दू महासम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जिम्मेवार नेताकै मुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई कस्तो संकेत मान्ने ?
भारतमा समग्र भारतललाई नै हिन्दूस्थान भनिएको छ । तर, भारत हिन्दू राज्य होइन । धर्मकर्म गर्ने मठाधीशहरु नै अहिले राज्यको माथिल्लो निकायमा छन् । तर, उनीहरुले पनि भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेका छैनन् ।
जहाँसम्म हाम्रो पार्टीका महामन्त्रीले नै कुनै धार्मिक कार्यक्रममा नभई पार्टीको कुनै फोरममा गएर दिएको त्यस्तो अभिव्यक्ति उचित होइन । त्यो मैले अघि पनि भने । व्यक्तिगत रुपमा म पनि हिन्दू हो । म पनि पूजाआजामा विश्वास राख्छु । तर, मैले अभिव्यक्त गर्ने विचारले मुलुकको राजनीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । महामन्त्रीको पनि त्यही हो । उहाँको निजी विचारले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव पार्दैन ।